China 65 HRC Square End mill-4 Flute mpanamboatra sy mpamatsy | Mingtaishun
· Ahafahana milina mandeha amin'ny laoniny avo lenta amin'ny fanapahana ny lafiny henjana (hatramin'ny HRC 70).
· Fanaronana multilayer nanoparticle.
· Mety amin'ny fametahana fitaovana mafy-mafy avy amin'ny HRC 45 ka hatramin'ny 70 noho ny fehiloha miakatra ambony sy ny mari-pana amin'ny okidasiôna voalohany.
· Mety amin'ny fitaovana miasa isan-karazany manomboka amin'ny vy ankapobeny ka hatramin'ny vy mafy.
Tombontsoa ho an'ny mpanjifa:
1. vola miditra bebe kokoa: noho ny tahirintsika lehibe dia azo fehezina ny vidin'ny fitaovana. Miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana azonay atao, afaka manampy anao hahazo fidiram-bola bebe kokoa izahay nefa miaraka amin'ny vidiny ambany kokoa.
2. Tsy misy kalitao mitaraina: Amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso kalitao manomboka amin'ny akora hatramin'ny fizotry ny famokarana ary 100% alohan'ny fandefasana azy, noho izany dia afaka manampy anao izahay hanalavitra ny mpanjifa mimenomenona amin'ny resaka kalitao.
3. Serivisy fivarotana iray: manana karazana fitaovana fikosoham-bary cnc isika, bitika router cnc ary fitaovana fandavahana cnc. Tsy mila mividy na aiza na aiza ianao ary mandoa ny vidin'ny fandefasana amin'ny toerana rehetra.
4. Ampitomboy ny tahan'ny fiovam-po an'ny mpanjifa: miaraka amin'ny traikefa teknika sy tsena, afaka manampy anao izahay hiteraka mpanjifa bebe kokoa miaraka amin'ny tahan'ny fiovam-po.
5. Fanamarihana haingana: manolotra serivisy an-tserasera 24 ora izahay, ny fanontaniana rehetra avy aminao na ny mpanjifanao dia hovaliana avy hatrany, ho faly ny mpanjifanao, avy eo ho faly ianao.
6. Fitaovana cutomized: Fitaovana namboarina dia azo omena mifanaraka amin'ny sary sy ny sangan'asanao.
Teo aloha: 65 HRC Carbide 4 Flute Standard Length Corner Radius End Mills
Manaraka: 60 HRC Carbide 2 Flute Standard Length Ball Nose End Mills